थाहा पाउनुहोस बियर पिउनुका फाइदा हरु – नयाँ सन्देश
चिया र कफी जत्तिकै, संसारमा अर्को ड्रिक अर्थात् बियरको लोकप्रियता कसलाई थाहा छैन होला र ? हुनत बियर अत्त्याधिक मात्रामा पिउनु स्वथ्यको लागि फाइदाजनक हुदैन तर एस्तो पनि होइन कि यसले केवल नोक्सान नै नोक्सान पुर्याउछ, बियर पिउनाले स्वास्थ्यमा मदत पुग्छ भन्ने कुराले तपाइँ चकित हुन सक्नुहुन्छ तर आस्चर्य नमान्नुहोस यथार्थ यहि हो कि बियर पिउनाले हाम्रो शरिलमा अनेक फाइदाहरु हुन्छ / यदि तपाइँ कहिले काही बियर पिउनु हुन्छ ? र त्यो पनि सन्तुलित मात्रामा भने यसले तपाइको सरिरमा धेरै नै फाइदा भैरहेको हुन्छ ।
बियर पिउने मानिसहरु दिर्घजीबी हुन्छ
सन्तुलित मात्रामा बियर पिउनु तपाइँको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। यसमा अल्कोहोल को मात्रा वाइन र व्हिस्की को भन्दा तुलनात्मक रुपले कम हुन्छ / बियर को सन्तुलित मात्रा मा पिउने हो भने उपयुत्त हुन्छ । कुनै श्रोत ले बताएको छ कि अत्त्याधिक बियर पिउने र कत्ति पनि बियर नपिउने हरु भन्दा सन्तुलित मात्रामा बियर सेबन गर्ने मानिस नै लामो जिबन बाचन ।
बियरले कोलेस्ट्रोल को स्तरमा सुधार गर्छ
बियरमा कोलेस्ट्रोल हुदैन तर पनि यसले शरिलमा कोलेस्ट्रोल को स्तर सुधार्ने काम गर्छ। सन्तुलित मात्रामा बियर सेवन गर्नाले शरिलमा गुड अथवा ब्याड कोलेस्ट्रोल को स्तरमा सुन्तुलन ल्याउछ। बियरले शरिलमा कोलेस्ट्रोलको मात्रामा ब्रिद्दि ल्याउछ। ताजा सितनसंग दिनमा एउटा बियर पिउनाले गुड कोलेस्ट्रोलको स्तरमा चार गुणा वृद्धि ल्याउछ ।
बियरमा अत्त्याधिक मात्रामा भिटामिन बि हुन्छ
बियर अथवा अन्फिल्टर या लाइट बियरमा भिटामिन बि को सबै रुप उच्च स्तरमा हुन्छ। यसमा फोलिक एसिड हुन्छ जसले तपाइँकाे दिनभरी को काम गर्न पर्याप्त उर्जा दिन्छ। यसको साथै यसले हाम्रो सरिर बाट फोहोर निकाल्ने पनि गर्छ , बियर ले हाम्रो सरिरमा मग्नेसियम र पोटस्सिउम को स्तर बढाउने काम गर्दछ।
बियर सेबन गर्नाले हृदयघात बाट बचाउछ
तपाईलाई भिटामिन द्वारा अत्त्यधिक लाभ लिनु छ भने बियर पिउन जरुरि छ। रेडवाइन बाहेक डार्क बियरमा प्रशस्त मात्रामा याण्टी अक्सिडेण्ट हुन्छ ।अमेरिकन हेअट अस्सोसिअसनले बियर अन्ने अल्कोहोल पिय पदार्थ को तुलनामा उत्क्रिस्ट रहेको बतायाको छ। दिनहु तिन पेक बियर पिउनाले मुटु रोग नालाग्न्ने कुरा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ले १९९९ मा सार्वजनिक गरेको थियो । साथै एसो गर्दा मुटुरोग को खतरा २४.७ प्रतिसतले कमि आउँने श्रोतले टिप्पणी गरेको थियो ।
बियरले क्यान्सर संग लड्ने काम गर्छ
बियरको सबैभन्दा उत्तम फाइदा यहि हो कि यसले क्यान्सर संग लड्न सहयोग गर्छ। बियर बनाउनदा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थमा जेंन्थोहुमल समाबेस गरिन्छ जसले cancer संग लड्न सहयोग गर्दछ। यो एन्टी अक्सिडेण्ट केवल बियर मा मात्रै पाइन्छ जुन यति लाभदायक हुन्छ कि जर्मनीका मान्छे हरु यसको स्तर बढाएर एक खास बियर तयार गर्छन।
बियर पिउनाले पेट लाग्दैन
युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डन ले गरेको एक अध्ययन अनुसार सन्तुलित मात्रामा बियर पिउने मानिसमा पेट लाग्ने समस्या नाआउने जनाएको छ। बिएर सेबन गर्ने मानिस बिएर सेबन नगर्ने मानिस जतिकै मोटो हुने श्रोतले जनाएको छ अझ कतिपयले त यतिसम्म भनेका छन् कि सन्तुलित मात्रामा बिएर पिउने मानिसको तौल बिएर नपिउने मानिसको तौल भन्दापनि कम हुन्छ
बिएरमा क्यालोरी को मात्रा निकै कम हुन्छ यसमा carboryarate को मात्रा पनि निकै कम हुने हुदा स्वास्थयको लागि हानिकारक हुदैन अझ यसमा कोलेस्ट्रोल त हुदैहुदैन।
बिएर पिउनाले किड्नीमा पथर हुदैन
अमेरिकामा भएको एक अध्ययनका अनुसार बिएर पिउनाले पथरी हुने सम्भाबना निकै कम हुन्छ उक्त अध्ययनमा यो कुरा खुलाएको थियो कि ४० प्रतिसत बिएर पिउने मानिसमा किड्नी पथरी हुने खतरा बिएर नपिउने मानिसको तुलनामा घटेको थियो ।
बिएर पिउनाले हड्डी बलियो हुन्छ
यदि तपाइँ आफ्नो हड्डीहरु बलियो बनाउन चाहनु हुन्छ भने बिएर पिउन आबस्यक छ बिएरमा पाइने सिलिकन हड्डीको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। विभिन्न बिएरमा यो विभिन्न मात्रामा राखिएको हुन्छ लाइट बिएरमा सिलिकनको मात्रा कम हुन्छ
बिएर पिउनाले एल्जाइमर जस्ता मानसिक रोगको खतरा कम हुन्छ सन् २००५ एघार हजार बुढी महिलामा गरिएको अध्ययनका अनुसार उनीहरुले उक्त कुरा खुलाएका थिए
संकलन- जगदीश के सी
सम्पादक- मदन मुस्कान क्षेत्री
किन लाग्यो धुर्मुसलाई यस्तो गम्भिर आरोप ? भाबुक हुदै धुर्मुसले भने “प्रमाणित भए म संसार छोड्छु”